လက်ဦးဆရာ ပီသပါစေ - Hello Sayarwon
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ဦးဆရာတွေကဘယ်သူများလဲ…. လက်ဦးဆရာ မည်ထိုက်စွာ ပုဗ္ဗာစရိယ မိနဲ့ဖ ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကလေးတစ်ယောက်အတွက် လက်ဦးဆရာတွေက မိဘနှစ်ပါးပါ။ လက်ဦးဆရာဆိုတာက အမည်နာမနဲ့ညီအောင် လက်ဦးဆရာပီသဖို့လည်း လိုပါမယ်။ ဒီလိုလက်ဦးဆရာပီသအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာကြီးပြင်းစေဖို့ လိုသလို သူတို့လေးတွေရဲ့ ပြင်းပြနေတဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကို အကောင်းဆုံးပျိုးထောင်ပေးတတ်ဖို့လည်း လိုပါမယ်။
ကလေးတစ်ယောက်ကို ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွားရုံနဲ့ တာဝန်ကျေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အကောင်းဆုံးကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်လာအောင် ပျိုးထောင်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ ကလေးတစ်ယောက်အကောင်းဆုံး ကြီးပြင်းစေဖို့က အာဟာရပြည့်ဝစေဖို့လိုသလို ကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အကျင့်အနေအထိုင်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင် အကောင်းဆုံးပျိုးထောင်ပေးဖို့လိုပါမယ်။
ကလေးဆိုတာမျိုးက ဖယောင်းလေးတွေလိုပါပဲ လိုသလိုပုံသွင်းလို့ရပါတယ်။ ငယ်စဉ်မှာကတည်းက အကောင်းဆုံးပျိုးထောင်ပေးမှ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ထူးချွန်ပြီးအရည်အသွေးပြည့်ဝသူတစ်ယောက်အဖြစ်ကြီးပြင်းလာစေမှာပါ။ ကလေးတစ်ယောက်အကောင်းဆုံး ကြီးပြင်းလာစေဖို့က ဖေဖေမေမေတို့အနေနဲ့ ဒီအချက်လေးတွေကို ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပါမယ်။
ကလေးတစ်ယောက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပါထူးချွန်ထက်မြက်သူအနေနဲ့ ကြီးပြင်းလာစေဖို့ဆိုရင် ဒီအာဟာရဓာတ်တွေကို ပြည့်ဝအောင် ကျွေးမွေးပေးဖို့လိုပါမယ်။ ကလေးကို ငယ်စဉ်ကတည်းက
ပရိုတင်း – ကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်တွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့၊ အရိုးနဲ့ကြွက်သားတွေကြီးထွားသန်မာစေဖို့အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်အားဖြစ်စေနိုင်ပြီး သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်သယ်ဆောင်မှုကောင်းစေဖို့နဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့လည်း အရေးပါတဲ့ အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးပါ။
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် – ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်အားပြည့်နေစေဖို့ အရေးပါတဲ့ ဓာတ်တစ်ခုပါ။ တစ်ရှူးတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့နဲ့ ပျက်စီးသွားတဲ့ တစ်ရှူးတွေနေရာမှာ အစားထိုးမယ့် တစ်ရှူးအသစ်တွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့လည်း အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်လည်း အရေးပါပါတယ်။
အဆီ – အဆီဆိုတဲ့နေရာမှာ အကျိုးပြုတဲ့အဆီရယ် အကျိုးမပြုတဲ့အဆီရယ်ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ဒီအဆီနှစ်မျိုးထဲမှာမှ ကလေးကို အကျိုးပြုတဲ့အဆီ ကျွေးမိဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကလေးကို ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အဆီပါတဲ့ အစားအစာတွေကို သတိထားကျွေးပေးပါ။
ကယ်လ်ဆီယမ် – ကလေးမှာ ကျန်းမာတဲ့ အရိုးနဲ့သွားတွေကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ သွေးတိတ်စေဖို့၊ အာရုံကြော၊ ကြွက်သားနဲ့နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရမယ့်အချိန်မှာ အကောင်းဆုံးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
သံဓာတ် – ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်တွေဆီအောက်ဆီဂျင်ရောက်ရှိစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး သွေးအားကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းစေပြီး အမြဲတက်ကြွလန်းဆန်းနေစေမှာပါ။
ဖောလိတ် – ကလေးအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးပါ။ ဆဲလ်တွေဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ရော ကျန်းမာစွာကြီးပြင်းစေဖို့ရော ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကောင်းစေဖို့ပါ အရေးပါတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးပါ။ သွေးအားနည်းရောဂါမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါသေးတယ်။
အမျှင်ဓာတ် – အစာခြေစနစ်ကျန်းမာပြီး ဝမ်းမှန်စေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ နှလုံးရောဂါ နဲ့ ကင်ဆာမဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျှင်ဓာတ်ပြည့်ဝအောင် ဂရုစိုက်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
ဗီတာမင် A – အမြင်အာရုံကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးစေဖို့၊ အရေပြားကျန်းမာစေဖို့၊ ရောဂါပိုးတွေအန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်
ဗီတာမင် C – အအေးမိ၊တုပ်ကွေးဖြစ်တာတွေကနေ ကာကွယ်ပေးပြီး သွေးကြောနံရံတွေကိုကျန်းမာစေသလို အရေပြားကျန်းမာစေဖို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အနာကျက်စေနိုင်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ အရိုးနဲ့သွားတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
ဗီတာမင် D – ကယ်လ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှုကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အရိုးနဲ့သွားတွေကို သန်မာစေနိုင်သလို တက်ကြွလန်းဆန်းစေဖို့လည်း အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ သဘာဝကပေးတဲ့ ဗီတာမင်တစ်မျိုးပါ။
ကလေးကို အကောင်းဆုံးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ဆိုရင် အာဟာပြည့်ဝအောင်ကျွေးမွေးတာအပြင် ဒီအချက်လေးတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပါမယ်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပေးပါ – ကလေးကို တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး နာရီဝက်လောက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပေးပါ။ ကလေးကို ကိုယ့်နဲ့အတူတူ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ခိုင်းပေးပါ။
စာဖတ်တဲ့အကျင့် မွေးပေးပါ -ကလေးကို အသိဉာဏ်ပညာကြွယ်ဝသူအဖြစ်ကြီးပြင်းလာစေဖို့ ငယ်ငယ်ကတည်း စာဖတ်ဝါသနာပါသူဖြစ်အောင်ပျိုးထောင်ပေးပါ။ ကလေးကို သုတရသအကုန်ဖတ်တတ်အောင် သင်ပေးတာက သင့်ကို လက်ဦးဆရာပီသစေမယ့်အချက်တွေထဲကတစ်ခုပေါ့။ ကိုယ်တိုင်လည်း စာဖတ်ပါ။
ဝါသနာကို အသိအမှတ်ပြုပါ– မိဘတွေမှာ အတ္တတစ်ခုရှိကြပါတယ်။ ဒါကလည်း သားသမီးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တဲ့ အဖြူရောင်အတ္တပါ။ ဒါကတော့ ကလေးဝါသနာပါရာထက် အောင်မြင်နိုင်ခြေများတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်စေချင်တာပါ။ တကယ်ကတော့ လူတစ်ယောက်ကို ထိပ်ဆုံးရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တာက သူဝါသနာပါရာကို လုပ်ဆောင်ခွင့်ရခြင်းပါ။ ဒါကြောင့် ငယ်စဉ်ကတည်းက ကလေးရဲ့ ဝါသနာပါရာကို အောင်မြင်အောင်မြေတောင်မြှောက်ပေးပါ။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းအောင် သင်ကြားပေးပါ – ကလေးတစ်ယောက်ကို အကောင်းဆုံးကြီးပြင်းစေဖို့က IQ ရော EQ ကိုပါကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ ဒါကြောင့် ငယ်ငယ်ကတည်းက ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းသူလေးဖြစ်အောင် ပျိုးထောင်ပေးပါ။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆက်ဆံရေးကောင်းသူတစ်​ယောက်ဖြစ်အောင်နေပေးပါ။
အချိန်ပေးပါ – ကလေးကို ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ဖို့အတွက် အချိန်ပေးပါ။ ဒါမှ မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရရှိပြီး ကလေးကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတိုးစေမှာပါ။ ယုံကြည်မှုပြည့်ဝတဲ့ ကလေးတွေက ဘဝမှာ ပိုမိုအောင်မြင်တတ်ကြပါတယ်။
ကလေးကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေကိုပါ ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ပေးလို့ လက်ဦးဆရာပီသလိုက်ပါ မေမေဖေဖေတို့ရေ…..
Kids Need Their Nutrients https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=kids-need-their-nutrients–1-19820 Accessed Date 26 November 2019
9 Must-Eat Nutrients for Your Child https://www.parents.com/kids/nutrition/healthy-eating/must-eat-nutrients/ Accessed Date 26 November 2019
Childhood Nutrition https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Childhood-Nutrition.aspx Accessed Date 26 November 2019
Children’s health https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/nutrition-for-kids/art-20049335 Accessed Date 26 November 2019
ကြယ်ပွင့်လေးရဲ့ ထူးချွန်ထက်မြက်မှုကို မေမေတို့ ဘယ်လိုအရောင်တင်ပေးမလဲ
သင့်ကလေးကို စာဖတ်ဝါသနာပါအောင် အားပေးပါ